Global Voices teny Malagasy » Ara-dalàna ny Fanalan-jaza Ao Orogoay, Saingy Nanome Rariny Ho An’ny Lehilahy Manakana Ny Fanalan-jaza Ataon’ny Vehivavy ny Didim-pitsarana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Marsa 2017 5:26 GMT 1	 · Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Orogoay, Fahasalamàna, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Vehivavy mihazona marika fanentanana fanohanana ny fanalan-jaza ara-dalàna tao Montevideo tamin'ny 2012. Sary avy amin'i Érico Matos via Wikimedia . CC BY-SA 2.0
Nihaona tamina lehilahy ny tovovavy iray. Tao anatin'ny fiarahana miombona sy misaraka nandritra ny enim-bolana izy ireo mandra-pifaneken’ izy ireo fa tsy mety intsony ny fiarahana. Mety hoe tahaka ny tantaram-pitiavana mahazatra ankehitriny izany, afa-tsy ny zava-misy taty aoriana raha nahita ilay tovovavy fa bevohoka izy.
Teo no niha-sarotra ny raharaha.
Rehefa nandinika ny safidiny sy niresaka tamin'ny sakaizany taloha, tapa-kevitra hanala zaza izy, saingy raha nanomboka hanao izany izy — zavatra (fanalan-jaza) izay avelan'ny lalàna ao amin'ny fireneny, Orogoay, atao hatramin'ny faha-12 herinandro amin'ny fitondrana vohoka — nahita izy fa nisy nitory.
Te “hiaro ny ain'ity zazakely mbola tsy teraka ity” ny sakaizany taloha, ka noho ny fanampian'ny vehivavy mpitsara iray, tapaka ny hevitra fa “araka ny lalàmpanorenana” ambony noho ny zon'ny vehivavy ny zon'ny “zaza ao an-kibo”. Tonga tao anatin'ny fotoan-tsarotra ny didim-pitsarana, satria efa ho tapitra ny fotoana 12 herinandro ahafahana manala zaza ara-dalàna.
Fotoana fohy taorian'izany, afa-jaza ilay vehivavy –izay tazonina tsiambaratelo ny anarany. Saingy mitohy ny adihevitra satria tsy matoky izany fahafahan-jaza izany  ny fampahalalam-baovao sy ny olona sasany (na dia mampiseho aza ny antontanisa  fa mateti-pitranga ny fahafahan-jaza. Ho an'ilay vehivavy, tolona hanoherana ilay mpitsara sisa no ataony ankehitriny :
Tezitra aho satria ny asan'ny [mpitsara] dia manaja ny lalàna ankehitriny. Lalàna izay niadian-kevitra sy nankatoavina tamin'ny alalan'ny latsa-baton'ny Orogoayana[…] Mety hanimba anao ny fanapahan-kevitra tahaka izao. Tena nahatsiravina ity herinandro ity. Samy nanana ny heviny momba ahy ny tsirairay. Nanery ahy hihazona [ilay zaza] ny mpitsara ary ny tena ratsy indrindra dia ny fanomezan-tsiny rehefa misy olona miteny amin'ilay zaza hoe: “Teraka ianao noho ny didin'ny mpitsara, fa tsy hoe nirian'ny reninao ianao.”
Nahatonga an'i Orogoay niady hevitra momba ny filazan'ny raim-pianakaviana mikasika ny fanalan-jaza  ny raharaha. Dimy taona taorian'ny nandaniana ny lalàna nanome zo ho an'ny vehivavy hanala zaza tsy niriana ary nosoniavin'ny filoha José Mujica, nanakana izany ny fanapahan-kevi-pitsarana. “Mahatsiaro tsy voahaja aho, toy izany koa ny fiainako sy ny fanapahan-kevitro, maninona ianao, ahoana no fahatsapanao na nahoana ny tsy miraharaha ny hafa ianao,” hoy ilay vehivavy tamin'ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra  tamin'ny fampahalalam-baovan'ny Telenoche.
Araka ny filazan'ny fampahalalam-baovao Orogoayana El Pais , nanamarina ny fanapahan-keviny i Pura Book Silva, ilay mpitsara ambadiky ny fanapahan-kevitra nanome tombony ho an'ilay lehilahy tamin'ny alalan'ny filazana fa “tsy azo raisina ho kirakira matematika ny lalàna momba ny fanalan-jaza” ary tsy maintsy miditra an-tsehatra ny fitsarana mba hiaro “ny zon'ny zazakely.”Nilaza ihany koa ilay mpitsara hoe:
Manan-jo hajaina ny fiainan'ny olona tsirairay. Harovan'ny lalàna izany zo izany, ary amin'ny ankapobeny, manomboka amin'ny fotoana fanorotoroana ny zazakely. Tsy misy olona azo esorina fahatany ny ainy.
Nampizarazara ny Orogoayana ny raharaha. Fanapahan-kevitry ny mpitsara mifanandrina amin'ny lalàmpanorenana. Ny zon'ny vehivavy amin'ny vatany mifanandrina amin'ny zon'ny zaza ao am-bohoka. Zava-dehibe ny manamarika fa miadana ny lalana mankany amin'ny fanomezan-jo ny fanalan-jaza ao Orogoay. Tsy nankatoavina tsy nisy nitsipaka tao amin'ny Antenimieran-doholona ny lalàna tamin'ny taona 2012, ary herintaona taty aoriana, nanosika ny hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka ny vondrona miezaka hamadika ny tsy fanamelohana ny fanalan-jaza saingy tsy nahavita nahazo ny fanohanam-bahoaka  nony farany.
Nankalaza ny fanapahan-kevitra ny vondrona ray aman-dreny eny ifotony, antsoina hoe “Ny Tsirairay hiaro ny Zanatsika,” noho ny “tsy fanekena ny teritery ataon'ny vondrona ara-tsosialy sasany,” araka ny filazan'ny gazety El Observador.  Nilaza ny iray tamin'ireo solontenan'ny vondrona fa resaka fitovian-jo ihany koa izany, milaza momba ny zo hanapa-kevitra hiaro ny raim-pianakaviana:
Mila manome fahafahana ho an'ny raim-pianakaviana mba hiteny momba ity olana ity ihany koa isika.
Tsy niombon-kevitra ilay Sekreteran'ny Fahasalamana taloha Leonel Briozzo, izay tompon'andraikitra tamin'ny fampiroboroboana ny lalàna tamin'ny taona 2012. Nampiasa ny kaonty Twitter-ny izy mba hanehoany ny heviny:
Nanao fahadisoana tsy azo leferina ny mpitsara: Nampiasa ny finoany ara-pivavahana, ara-poto-kevitra sy ara-politika izy tamin'ny fampiharana ny lalàna
Tsy misy mpitsara afaka manakana lalàna izay voaporofo fa manome tombontsoa ary tsy nambara fa tsy araka ny lalàmpanorenana, fiezahana hanakana ny asan'ny mpiasan'ny fahasalamana izany.
Na izany aza, nanohana ny fanapahan-kevitr'ilay mpitsara ny Fikambanan'ny Mpitsara ao Orogoay. Araka ny filazan'ny El Observador , manamarina ny fomba fijeriny izy ireo tamin'ny fiarovana ny “fahaleovantenan'ny mpitsara.” Ho an'ny Fikambanana, ny fanapahan-kevitra rehetra raisin'ny mpitsara dia mifototra amin'ny “zava-misy mifanaraka amin'ny lalàna.”
Nahatonga ny fihenan'ny taham-pahafatesana eo am-piterahana ny fanalan-jaza ara-dalàna
Nampiseho ny fikarohana navoaka tao amin'ny Gazety Iraisampirenena momba ny Taovam-pananahan'ny vehivavy sy ny Fiterahana  tamin'ny taona 2016 fa i Orogoay no firenena manana taha ambany indrindra amin'ny taham-pahafatesana eo am-piterahana ao Amerika Latina. Araka ny filazan'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamana (OMS), nandrakitra fahafatesana 14 isaky ny zazakely teraka velona 100 000 ny firenena. Tao anatin'ny 25 taona, nampihena ny taham-pahafatesana eo am-piterahana ho 59,5% i Orogoay. Hatramin'ny taona 2005, tompon'andraikitra 37,5% tamin'ny taham-pahafatesana ny fanalan-jaza.
Milaza kosa ny fikarohana notontosain’ ilay Breziliana mpitsabo Anibal Faúndes fa ny antony lehibe mahatonga ny fahafatesan'ny vehivavy mitondra vohoka tamin'ny taona 1990 tao Orogoay dia ny fanalan-jaza mampidi-doza, nateraky ny «fiverezan-drà be loatra sy ny fahasarotana hafa.» Tamin'ny taona voalohan'ny fanalan-jaza ara-dalàna, fanalan-jaza 6 676 no voarakitra tao Orogoay ary nahitana fahafatesana iray monja: dia vehivavy iray nankany amin'ny renin-jaza mba hitady fanampiana.
Fikambanana marobe miasa ho amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy no nanasonia fanambarana manohitra ny fanapahan-kevitry ny mpitsara . Manamarika ny fanambarana fa tsy manana lalàna miantoka ny “zon'ny zazakely ao am-bohoka” i Orogoay ary noho izany «ny sakana rehetra atao amin'ny vehivavy sy ny zo hanala zaza eo ambanin'ny fepetra voasoritry ny lalàna dia fanitsakitsahana ny zony, izay mahatompon'andraikitra ny fanjakana.”
Tamin'ny resadresaka taminy, nandinika ilay vehivavy lasibatra hoe:
Hanohy [hitady lalana] ry zareo mba tsy hanan-jo hanapa-kevitra momba ny fiainan'izy ireo manokana ny vehivavy […] Miverina amin'ny fomba taloha isika, izay tsy maintsy manapa-kevitra ho an'ny tenan'izy ireo miaraka amin'ny sotrokely sy ny ny vehivavy ary maty mihoso-drà ao ivelany. Fihemorana ara-maoraly ho an'ny vehivavy izany, satria tsy mbola tompon'ny vatantsika manokana isika. Misy ny lalàna, saingy tsy ampiharina aminao izany […] Nahoana ry zareo no manome alalana hanome mpisolovava manokana ho an'ny zaza ao am-bohoka, kanefa mbola tsy teraka izy ary tsy mbola manana lalàna amin'izany?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/10/96440/
 tsy matoky izany fahafahan-jaza izany: https://elparisdigital.wordpress.com/2017/03/02/emocionante-titulador-de-subrayado-hd-gana-premio-al-entrecomillado-tendencioso-de-oro-2017/
 mampiseho aza ny antontanisa: https://www.verywell.com/measuring-miscarriage-statistics-2371530
 tolona hanoherana ilay mpitsara sisa no ataony ankehitriny: http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/02/hablo-la-mujer-a-la-que-le-prohibieron-abortar-en-uruguay-ahora-voy-a-ir-con-todo-contra-la-jueza/
 Orogoay niady hevitra momba ny filazan'ny raim-pianakaviana mikasika ny fanalan-jaza: http://www.elpais.com.uy/informacion/jueza-ordena-suspender-interrupcion-embarazo.html
 resadresaka tamin'ny fahitalavitra: http://www.telenocheonline.com/sociedad/joven-embarazada-todo-el-mundo-decide-sobre-tu-vida-menos-vos.html
 tsy nahavita nahazo ny fanohanam-bahoaka: http://www.elobservador.com.uy/fracaso-el-referendum-el-aborto-y-la-ley-quedara-firme-n253751
 El Observador.: http://www.elobservador.com.uy/fallo-que-impidio-mujer-abortar-genero-diferencias-abogados-n1036505
 Gazety Iraisampirenena momba ny Taovam-pananahan'ny vehivavy sy ny Fiterahana: https://www.pagina12.com.ar/sites/default/files/inline-files/ijgo-134-suppl-1-spanish.pdf
 fanalan-jaza 6 676 no voarakitra tao Orogoay : http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/07/sociedad/1394208119_165255.html
 fanambarana manohitra ny fanapahan-kevitry ny mpitsara: https://www.facebook.com/cotidianomujeruy/photos/a.506141549441586.1073741828.505949466127461/1311807378874995/?type=3